Qaramada Midoobey oo walaac ka muujisay xaaladda Magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaramada Midoobey oo walaac ka muujisay xaaladda Magaalada Muqdisho
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in si weyn uu uga walacsan yahay qalalaasihii shaley ka dhacay Muqdisho.
Wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku hayo siyaasadda Soomaaliya inay ku dadaalaan xasiloonida.
Xoghayaha guud wuxuu ugu baaqay madaxda dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada in si deg deg ah u yeeshaan kulan heshiis looga gaarayo arrimaha doorashada.
“Xoghayaha guud wuxuu ku baaqay in la qaddariyo xuquuqda ku saabsan qabashada isu soo bax nabadeed iyo xoriyadda hadalka” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Qaramada Midoobey.
Shaqaaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa shalay iyo habeen hore waxaa ay ka dhaceen Muqdisho, iyadoo Ciidamada dowladda ay weerareen hoteelkii ay daganaayeen Madaxweynayaashii hore rasaasna ku fureen bannaan bax ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah Midowga Musharaxiinta.
Wakiilada Beesha Caalamka oo kulan Deg-deg ka leh xaaladda Soomaaliya